Toddobaadkan wuxuu diiradda saaray FBI, Apple iyo arrimaha gaarka ah. Isniintii la soo dhaafay waxaan ku soo toosnay warka xafiiska qareenka Mareykanka, kaasoo FBI-da u fasaxay codso furitaanka boosteejada argagixisada weerarkii San Bernardio, si loo helo oo markaa looga fogaado weerarada mustaqbalka iyo, si lama filaan ah, u ogaato haddii ay jiraan dad kale oo gacan ka geysta dhacdadaas nasiib darrada ah.
Tim Cook si deg deg ah uga jawaabey codsigii adoo diidey inuu furo qalabka hadda samee bannaanka gadaashiisa macruufka taas oo u oggolaanaysa mas'uuliyiinta inay galaan marinnada markasta oo ay doonaan, iyagoo ku xadgudbaya asturnaanta isticmaaleyaasha alaabooyinka Apple, mid ka mid ah astaamaheeda ugu waaweyn. Google, Microsoft, Facebook waxay muujiyeen taageerada ay u hayaan go'aanka shirkadda ku saleysan Cupertino.Donald Trump, Musharaxa Xisbiga Jamhuuriga ee Madaxweynaha Mareykanka, ayaa layaab ku muujiyay diidmada Apple oo codsaday taas isticmaaleyaashu way joojin doonaan isticmaalka aaladaha shirkadda, illaa Apple ay FBI ka caawiso arrintan. Iyada oo ku saleysan wararkii ugu dambeeyay ee aan ka hayno codsigan, waxay u muuqataa taas FBI-da ayaa mar hore heli laheyd aaladda oo beddeli lahayd aqoonsiga la xiriira.
Toddobaadkan waxaan ku tusnay a fikrad cusub oo ah iPhone 7 oo leh laba kamaradood ku xiga naqshad cusub oo muujin karta iPhone 5se, iPhone ah in sida muuqata dad badani ma daneeyaan. Fikradda Apple waa inay ku soo bandhigto qalabkan inta badan dalalka soo koraya sida Hindiya iyo Brazil, halkaas oo kuwa Cupertino ayaa joojiyay iibinta aaladaha ugu da'da weyn shirkadda iPhone 5c iyo iPhone 4s.
Maanta oo Axad ah Shirweynihii adduunka ee mobilka ayaa ka bilaabanaya magaalada Barcelona halkaas oo shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara taleefannada gacanta sida Samsung, LG, Sony, Huawei ay ku soo bandhigi doonaan dhammaan wararka suuqa ku dhici doona sannadkan. Tan iyo markii Blog News waxaad kala socon kartaa dhamaan wararka la soo bandhigo.
Apple waxay rabtaa inay kobciso iibinta iPhone-ka iyada oo la siinayo barnaamijka abaalmarinta shaqaalaha